Friday, April 19th, 2019 - 13:28:28
Messi oo laga yaabo in jeelka la dhigo 22 bilood
0 Friday October 09, 2015 - 16:59:35
(Kubadbile) - Xiddiga Barcelona waxa uu ka soo muuqan doonaa maxkamad isaga oo loo haysto musuq maasuq la xiriira lunsasho canshuureed.
keddib Messi & Ronaldo, maxay Barca & Arsenal ugu dagaallamayaan Saxiixa Nolito?
0 Thursday October 08, 2015 - 15:06:32
Labaduba Catalonia iyo Gunners waxay raadinayaan Laacibka Kooxda Celta Vigo, oo bandhig fiican ka sameeyay La Liga 2014-15.
De Gea: Madrid iska daa, waxaan Doortay Man Utd
0 Thursday October 08, 2015 - 10:59:27
Laacibka Goosha ilaaliya ee Dalka Spain ayaa sheegay kaliya in aan loo diidin ku biirista Los Blancos ee uu isaguba jecleystay Kooxdiisa Man Utd.
Coutinho Si qota dheer ayaan ugu Faraxsanahay' la jirka Liverpool
0 Thursday October 08, 2015 - 08:22:24
Ninkan oo 23-jir Brazil kasoo jeeda ah ayaa sheegay in uusan ku qanacsaneyn kooxaha La Liga ee Real-ta ku ciyaarta Santiago Bernabeu iyo Barcelona.
Barcelona oo aan soo de dejin doonin Lionel Messi
0 Wednesday October 07, 2015 - 21:55:20
(Kubadbile) - Agaasimaha ciyaarayaha Barcelona Robert Fernandez ayaa sheegay in aan la soo de dejin doonin Lionel Messi.
Douglas Costa oo diyaar u ah in uu buuxiyo Booska Neymar
0 Wednesday October 07, 2015 - 15:27:22
Garab weerarka kooxda Bayern Munich ayaa isu diyaarinaya in uu buuxiyo Booska Laacibka Neymar oo xulkiisa ka maqnaanaya Kulamada soo socda.
Aguero oo qaadanaya lambarka 10-aad ee Argentina, aaway Messi?
0 Wednesday October 07, 2015 - 15:11:57
Laacibka Kooxda Man City ayaa doonaya in uu Lambarka 10-aad ee xulka Argentina ka beddelo Barcelona geesigeeda Messi.
Warbixin : Sida loo kala Horeeyo Hogaamita 5-Horyaal ee Caalamka "Big 5" iyo Layaabka haysta kooxaha waa weeyn
0 Wednesday October 07, 2015 - 12:59:26
(Kubadbile) Shanta horyaal ee caalamka ugu sareeya "Big 5" ayaa waxaa ka dhex taagan loolan daran muddo aan hadda ka badnayn 10-isbuuc oo kaliya , naadiyo aan laga filayn ayaa taagan 4-ugu sareysa horyaal kasta , naadiyo waawayn ayaa ciidda afka loo daray , qaar kale oo tun weynaa ayaa fadhiya…
Kaka oo sheegay hadduu jebiyo Rikoorka Gooldhalinta Brazil in Neymar uu kusoo xigi doono
0 Wednesday October 07, 2015 - 11:52:17
Kubbad qaabeeyihii hore ee Real Madrid ayaa noqonaya Gooldhaliyihii ugu sarreeyay ee abid xulka Brazil, balse waxaa uu rumeysanyahay in Neymar uu noqon doono ninka Rikoorkaas kasii jebiya.
Lionel Messi Aabihiis Oo Lagu Xukumaayo 18-Bilood Oo Xabsi Ah
0 Wednesday October 07, 2015 - 09:25:30
(Kubadbile) Kooxda Barcelona iyaaryahankeeda Lionel Messi ayaa ka badbaaday in lasoo taago Maxkamada dhanka Canshuuraadka ah balse abaahiisa ayaa la sheegay in lagu xukumi doono 18- bilood oo xabsi ah.
Rijkaard: "Si fudud ayaan ugu laaban karaa Barcelona"
0 Tuesday October 06, 2015 - 17:10:08
(Kubadbile) - Tababarihii hore ee Barcelona Frank Rijkaard ayaa sheegay in kastoo uusan hadda qorsheneyn in uu tababarka ku laabto hadana in uu mar kale tababare u noqon karo Barcelona.
Benitez oo sheegay in Ronaldo uusan ahayn mid aan keydka la galin karin
0 Tuesday October 06, 2015 - 17:00:09
(Kubadbile) - Rafa Benitez ayaa sheegay in ay sheeko khiyaal ah tahay in Cristiano Ronaldo uu safkiisa ka yahay lama-taab taan marka laga yimaado in uu yahay laacibka dunidda ugu wanaagsan.
Benitez oo sheegay inuusan bedeli karin Ronaldo
0 Tuesday October 06, 2015 - 15:11:49
(Kubadbile) Dhawaan ayay aheyd markii Benzema uu cadeeyay inuu dhibsaday bedelada joogtada ah ee macallin Benitez uu ku sameeyo, walow taa maanta uu gaashaanka u daruuray layliyahaan reer Spain, misna saxaafada ayaa hor dhigtay sababta uusan u bedelin C.Ronaldo.
Ramos oo dhaawacmay lagana reebay qaranka Spain
0 Tuesday October 06, 2015 - 15:00:16
(Kubadbile) Real Madrid kabtankeeda Sergio Ramos ayaa lagu qasbay inuu ka haro safka qarankiisa Spain uga qeyb gelaya kulamada ay wejahayaan xulalka Luxembourg iyo Ukraine cayaaraha loogu soo baxayo Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2016.
Goormee Barcelona loo ogolaanayaa inay cayaartoy cusub lasoo wareegto???
0 Tuesday October 06, 2015 - 14:24:28
(Kubadbile) Agaasimaha cayaaraha kooxda Barcelona Roberto Fernández Bonillo ayaa ka hadlay waqtiga rasmiga ah ee saxiixyo cusub oo safkooda xoojiya ay kooxdu lasoo wareegi doonto.
Casillas oo amaanay goolhayaha Real Madrid Navas
0 Tuesday October 06, 2015 - 11:04:30
(Kubadbile) Iker Casillas ayaa ku amaanay goolhaye Keylor Navas inuu yahay goolhaye cajiib ah, xilli goolhayahaa uu noqday kan koowaad ee Real Madrid wakiilatay xagaagan.
Markii 5-aad Bale oo ku Guuleystay Laacibka ugu Wanaagsan Wales
0 Visits: 558 | Tuesday October 06, 2015 - 09:16:55
Bale ayaa Markiisii Shanaad ku guuleystay Laacibkii ugu fiicnaa Dalka Wales.
Benitez oo u jawaabay Benzema kadib eedeyntiisii shalay
0 Tuesday October 06, 2015 - 07:27:05
(Kubadbile) Real Madrid macallinkeeda Rafael Benitez ayaa jawaab ka bixiyay cabashadii weeraryahankiisa Benzema ee ku aadaneyd bedelada joogtada ah ee lagu sameeyo cayaaryahanka reer faransa.
David Moyes oo hoos u dhigay wararka la xiriirinaya shaqada Sunderland
0 Tuesday October 06, 2015 - 06:49:27
(Kubadbile) Real Sociedad hogaamiyaheeda David Moyes ayaa sida lasoo werinayo hoos u dhigay wararka la xiriirinaya u dhaqaqistiisa kooxda Sunderland oo la filayay inuu u dhaqaaaqi karo.
Dani Carvajal oo ka dhaawacmay Real Madrid
0 Monday October 05, 2015 - 18:52:05
(Kubadbile) Real Madrid oo ay dib ugu soo laabteen dhamaan daafacyadeedii ugu muhiimsanaa ee dhaawaca uga maqnaa, ayaa markan dhaawac daafac oo cusub uu soo wejahay markii uu dhaawcamay Dani Carvajal.
« Prev1 ... 153154155156157158159 ... 165Next »